ဘယ်အချိန်မှာ porn ပြpornနာတစ်ခုဖြစ်လာသောအခါ (အိုငျးရစျ Times သတင်းစာ) ။ လိင်ကုထုံးဆရာ Trish Murphy၊ Teresa Bergin၊ Tony Duffy (2015) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
porn ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အခါ (အိုင်းရစ် Times သတင်းစာ) ။ လိင်ကုသ Trish Murphy ကထရီဇာ Bergin, တိုနီ Duffy (2015)
ယောက်ျား 35-49 ထက်လုလင်တို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းကိုပြသပေးသော ED နှုန်းထားများတွေ့မှဂရပ်ဖစ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 8, 2015, 05: 45
ရာခေလသည်သူမ၏မိတ်ဖက်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူဖြစ်လာခဲ့သည်မတိုင်မီသူမက "လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းတဲ့ကျန်းမာ view" ကိုရှိခဲ့တယ်ထင်ခဲ့တယ်။ "သူကငါ့ကိုတဖန်ငါသန့်ရှင်းသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွတ်တိုက်ဘယ်တော့မှနိုင်အောင်ညစ်ပတ်ခံစားရဖွဲ့သောမှောင်မိုက်ထဲသို့ငါ့ကိုမဆင်းဆွဲ။ "
သူမ၏မိတ်ဖက်ပြည့်တန်ဆာကို အသုံးပြု. ရန် porn ဆိုဒ်များတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနာရီဖြုန်းကနေသွားပါမွငျလြှငျ, သူမယခုညစ်ညမ်းယောက်ျားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးများနှင့်ခြယ်လှယ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုယုံကြည်သည်; အမြိုးသမီးမြားအသားဖုကဲ့သို့အကုသတဲ့။ ။ ။ သူတို့ကအသံရှိသည်နှင့်မအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ကျနော်တို့မလုပ်ကြပါဘူး။ အဆိုပါ Luas ရက်နေ့တွင်, sittingroom အတွက် - ထိုအခါညစ်ညမ်းတိုင်းပြည်အတွင်းတိုင်းအိပ်ခန်း၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာဆိုက်ဘာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း-တွားပါတယ်။ "
ညစ်ညမ်းမဟုတ်ပါဘူး လုံးလုံး တချို့လူတွေထင်သကဲ့သို့ကျယ်ပြန့် (ရာခိုင်နှုန်း4တစ်ဦးထက်ပိုလက်တွေ့ကျပုံဖြစ်ပါသည်သော်လည်းပြုလုပ်လေ့, အင်တာနက် traffic ကိုသုံးပုံတစ်ပုံဖွဲ့စည်းဆိုပါတယ်) ။ စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူဘယ်သူ့ကိုမှရန်မရရှိနိုင်: မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကသမိုင်းအတွက်အခြားမည်သည့်အချိန်ကထက်ယခုထက်ပိုသောသုံးစွဲနိုင်သည်။
အဆိုပါကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရကို "porn" ပုံညင်သာပျော့ပျောင်းဗီဒီယိုများ, ဓာတ်ပုံများနှင့်လိင်၏အကောင့်များမှ, မှောင်မိုက်, ရိုင်းစိုင်းသည့်အကြောင်းအရာနှင့် "နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း porn" ကိုနေကြပါတယ်။
ဒီအဆုံးစွန်သောအမျိုးအစားမှာ "သားကောင်" ကိုမကြာခဏသရုပ်ဆောင်များကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းကိုလည်းသင်တန်းသားများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ကြရသောပစ္စည်းလည်းပါဝင်သည်: အရှေ့ပိုင်းဥရောပက်ဘ်ဆိုက်များမနုဿဗေဒပညာရှင်လော်ရာ Agustin သည်နှင့်အညီ, ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်အဆိုးဆုံးစံချိန်ရှိသည်။
'' မုဒိမ်း porn ''
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, သရုပ်ဆောင်များကိုတရားမျှတ, ကျန်းမာရေး-သတိထားအလုပ်လုပ်အခြေအနေများရှိသည့်အတွက်ဒါခေါ် "ကျင့်ဝတ်" porn, အခြို့ကာလီဖိုးနီးယား paid က်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ "အပျော်တမ်း" - အပြင်ပန်းအိမ်မှာလုပ် - ကို "အပျော်တမ်း" သိပ်သရုပ်ဆောင်များကိုဖြစ်များပါတယ်သော်လည်းဗီဒီယိုများ, အခြားလူကြိုက်များပုံစံရှိပါတယ်။
အချို့ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ access များအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံသော်လည်း, ထိုပျော့မအမာခံပစ္စည်းမဟုတ်တာဝန်ခံအခမဲ့တွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်။ "မုဒိမ်းမှု porn" အတွက်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များစာမျက်နှာများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ပစ္စည်းဟာညစ်ညမ်းရောင်စဉ်၏မဲမှောင်အဆုံးမှာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ညစ်ညမ်းပုံစံအမျိုးမျိုးကြာနှင့်မကြာခဏသဘောရိုးအလုံအလောက်စတင်ခဲ့သည်။
အလုပ်ရထားတွင်, ငါအိမ်ပြန်ဟော်ကီအလေ့အကျင့်ကနေသူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်နှစ်ခုကိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာပထမဦးဆုံးနှစ်သက်သေခံ - ရွှံ့ခြေအိတ်ထဲမှာကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦး။
သူတို့ကယောက်ျားလေး၏ iPhone ကိုကြည့်ကဲ့သို့, မိမိဝတ်လစ်စလစ် selfies တစ်စီးရီးပေါ်လာမှာပါ။ အဆိုပါမိန်းကလေး, ဖုန်းတိုးလာတယ်ပုံမှတဆင့် swipes နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများကသူတို့ကိုပို့ပေးရန်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါသည်။ သူကနောက်ကျော wrestle ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့blaséတုံ့ပြန်မှုသူမကမတိုင်မီဒီအမြင်ကြရဲ့အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းတို့သည်တဦးတည်းခြေလှမ်းကွာကလေးညစ်ညမ်းနေနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးအဘယျသို့ဖြန့်ဖြူးသားဖြစ်ကြ၏။
"ဒီကပိုလူငယ်များကိုမြင်ရ, ပိုသာမန်ကြောင့်ဖြစ်လာ," ထရီဇာ Bergin, လိင်-စွဲလူပျိုတို့အတူအလုပ်လုပ်သောသူတစ်ဦးကုထုံးကပြောပါတယ်။ "လူငယ်တွေရဲ့ '' ဦးနှောက်အထူးသဖြင့်ပလပ်စတစ်နေကြတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
Bergin ညစ်ညမ်း၏စဉ်ဆက်မပြတ် Hyper-arousal ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အစောပိုင်း 20s အတွက်ယောက်ျားဆကျဆံတယျ။ အစစ်အမှန်မိန်းမတို့အားကာမဂုဏ်ပြန်ပြောပြဖို့မအောင်မြင်ဘူး, သူတို့ကအစစ်အမှန်ဘဝနှင့်အတူမနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ပိုပြင်းထန်သော "အသစ်အဆန်း" ကိုရှာသူမကဆိုသည်။
လိင်၏ Distort view "ကိုအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် dopamine ထုတ်လုပ်မှုနှင့် neuroplasticity ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု Bergin ကဆိုသည်။ "ဒါဟာစွဲဖို့ဦးနှောက်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်စေသည်။ ။ ။ ဤလုလင်တို့ကထဲကယူရငျးနှီးသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလမ်းလွဲခဲ့ကြပြီ။ "
“ ယောက်ျားလေးတွေဟာအရင်ကထက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုခံနေကြရတယ်။ တချို့ကလိင်ဆက်ဆံရန်မစွမ်းနိုင်ကြောင်းပြသနေသည်။ သူတို့အတွက်၊ သူတို့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တွေ့ရသောအရာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ သူတို့ဟာပိုမိုအားကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုနှိပ်ပြီးရိုးရာကနေလမ်းလွဲသွားပြီး S&M လိုနေရာမျိုးကိုသွားကြတယ်။ ”
အိုငျးရစျ Times သတင်းစာ မကြာသေးမီကအိုင်းရစ်လူရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်တစ်ခုအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူ။ ဒီခဲ့သော်လည်းသူ၏ရလဒ်များစစ်တမ်းမှမဟုတ်ဘဲဖြေဆိုသူရာခိုင်နှုန်းအဓိပ္ပါယ် 83 ထက်အဖြစ်ပြဆိုမြင်စေသင့်တယ်တဲ့ဆန္ဒအလျောက်စစ်တမ်းသူတို့ 99-17 အသက်ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်း 34 အပါအဝင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ဟုဆိုသည်။
In အိုငျးရစျ Times သတင်းစာ လိင်စစ်တမ်းလူပျိုတို့ (သူတို့ထဲကရာခိုင်နှုန်းအသက် 17-17 နှုန်း 24) ၏သိသာထင်ရှားသောအရေအတွက်ကသူတို့နေ့စဉ် porn အသုံးပြုသောကဆိုသည်။ အမျိုးသမီးဖြေဆိုသူသုံးပုံတစ်ပုံ porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ရုံအမျိုးသမီးများ၏ရာခိုင်နှုန်း 1 နေ့စဉ်ကြောင့်ရှုမြင်ကြသည်။
မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများအတွက်, ညစ်ညမ်းအလွန်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ "နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်တဲ့သူတွေအတွက်, သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကြီးမားအခက်အခဲတစ်ခုအကြောင်းမရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို့ပြောပါတယ် Trish Murphy, psychotherapist နှင့် အိုင်းရစ် Times သတင်းစာ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်။ "ဒါဟာမကြာခဏသူတို့အကြံနဲ့ဘဝတွေကိုကျော်ကြာနှင့်သူတို့ကအလွန်ခက်ခဲလေ့အကျင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ "
မာဂရက် Dunn တစ်လိင်ကုထုံး, says: "Porn တက်ကြွစွာရငျးနှီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံမထိခိုက်စေခြင်းဖြင့်စစ်မှန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါဟာအထီးအပျြောအပါးအပေါ်အလွန်အာရုံစိုက်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ porn ကြည့်ယေဘုယျအားဖြင့်မထင်ရှားသောအရာကိုပြုလေ့နှင့်ထို့ကြောင့်မိတ်ဖက်ထွက်တွေ့သည့်အခါသစ္စာဖောက်တစ်အသိစေပါတယ်။ "
Dunn အခက်အခဲသည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးစိုက်ထူရှိခြင်းရှိခြင်းလူကိုမှုအရာ, အလွန်လျင်မြန်စွာစွဲမှအောက်သို့လိမ်တဲ့သူ "porn အသုံးပြုသူများကိုဆကျဆံတယျ။
"babyish ရှင်းလင်းစွာတစ်ဦးတိုက်ပိတ်လိုက်စားဖြစ်နေဆဲ," psychotherapist Brendan က Madden ကပြောပါတယ်။ "ဒီက fantasize နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ရရှိနိုင်မကျမည်အကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကျူးလွန်စိတ်ကူးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်စားပြုဘယ်မှာညစ်ညမ်း၏စံပြသဘာဝကိုထင်ဟပ်။ "
လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံးတိုနီ Duffy ကိုလည်းအစစ်အမှန်လောကရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ယောက်ျားရဲ့စွမ်းရည်ကိုမထိခိုက်စေ porn အသုံးပြုမှုကိုမမြင်စဖူး။
သိသာလိင်စွဲလမ်း၏ဧရိယာထဲမှာအလုပ်လုပ်သူများသည်အဆိုးဝါးဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြုံတွေ့ရပေမယ့်သူတို့တိုးပွားလာ regularity သူတို့နှင့်အတူမြင်နေနေကြသည်ဟုဆိုသည်။
"porn မှစွဲလမ်းမှုကပိုထင်ရှားလာနဲ့ကျွန်မအများဆုံးလိင်ကုသသဘောတူမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပိုများသောယောက်ျား porn နှင့်အတူအပြန်အလှန်ပိုပြီးမျက်နှာပြင်အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်, ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြဿနာပါပဲ "ဟု Duffy ကပြောပါတယ်။
ညစ်ညမ်းအနုတ်လက္ခဏာအမြဲဖြစ်သနည်း မဟုတ်သေချာပေါက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းဖြေကြားသူမြား၏ထက်ဝက် (စာမျက်နှာ2ကိုကြည့်ပါ) သူတို့ညစ်ညမ်းအဆိုးကို real-ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးထိခိုက်မယုံဟုပြောသည်။
ထိုအ Teresa Bergin လိင်ကုသ porn ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးကိုမြင်လျှင်နေစဉ်, ကအမြဲထိခိုက်မယ့်သူကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာလူဦးရေအများစုကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမလိင်ပညာရေးနှင့်အတူလူတချို့သင်ကြားပို့ချတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်, လုလင်တို့သည်လည်းသူတို့အတူတူ porn ကိုကြည့်တဲ့သူစုံတွဲများကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးနိုင်ပါသည်ဟုပြောနေစဉ်, သူတို့ရဲ့မေတ္တာချမှတ်ခြင်းသို့မျိုးစုံထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပြီးပြီဟုဆိုသည်ပါပြီ နေသမျှကာလပတ်လုံးနှစ်ဦးစလုံးသဘောတူညီမှု၌ရှိကြ၏အဖြစ်စွန့်စားမှုတစ်ခုသဘောမျိုး။ "
လိင်ကုထုံးအမ်မလီပါဝါစမစ်ကအမျိုးသမီးများအတွက်အဖြစ်လူတို့သညျအဘို့ပျော်စရာနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ "သမိုင်းကြောင်းအရ, အမြိုးသမီးမြားကြောင့်ရရှိနိုင်ခဲ့အရာကို porn မှလျော့နည်းနောက်သို့ခဲ့ကြပြီ။ mainstream porn နှင့်နေဆဲအကြီးအကျယ်လူလတ်ပိုင်းဖြောင့်ယောက်ျားမှနုပျိုရည်ရွယ်သည်။
"သို့သော်ဒီ storyline နှင့်အတူ '' အမျိုးသမီး porn 'နှင့်စစ်မှန်သော orgasm ရှိခြင်းအမျိုးသမီးတွေပါဝငျကွောငျးလိင်၏အသစ်တစ်ခုကိုလှိုင်းနှင့်အတူပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်ကားကိုလူတိုင်းကြောင့်အကျပ်ကိုင်သို့မဟုတ်အင်အားသုံးဖို့အတွက်ကောင်းစွာပေးဆောင်ကျန်းမာလျက်နှင့်မကြောင်း, ဆိုလိုတာက Ethics လုပ်နေကြသည်။ သူတို့စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်ဒုစရိုက်ဖြေရာမှအခမဲ့ပျော်မွေ့နိုင်အောင်ပိုများသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ porn ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုနေကြတယ်။ "
သဘောတူညီချက်ထဲမှာစုံတွဲ (မိမိတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတူတူကကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် အိုင်းရစ် Times သတင်းစာ စစ်တမ်း) အများအပြားအဟောင်းတွေအိုငျးရစျစုံတွဲများကဤလမ်းအတွက်အသုံးပြုရန်အကြံပြုထားသည်။
အားလုံးကတော့စုံတွဲများဤလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, Bergin ကဆိုသည်။ "ညစ်ညမ်း၏ရငျးနှီး-တိုးမြှင်သက်ရောက်မှုပြီးသားကောင်းစွာမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအတွက်ညှိကြသူစုံတွဲများမှချုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက် porn မှအညီအမျှပွင့်လင်းမရဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထဲကတဦးတည်းကထိခိုက်စေခြင်းငှါခံစားရလျှင်, အကျိုးသက်ရောက်မှုကအနုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ "
"ဟုသူကချွတ်သွားသည်နှင့်တစ်ဦးတည်းကချောင်းမြောင်းအခါ, လျှို့ဝှက်, အရှက်ကွဲတဲ့ကုလားကာရှိသေး၏လူနှစ်ဦးကစောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လိင်စိတ်နိမ့်သည်ဘယ်မှာဆက်ဆံရေးတက်မြိန်မှ porn ကိုသုံးပြီးအကြီးအဖြစ်နိုငျ [ပေမယ်] ။ ": Dunn ဖြည့်စွက်
လျှို့ဝှက် Dermod Moore က, လိင်စွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်သူတစ်ဦး psychotherapist, လျှို့ဝှက်အဓိကပြဿနာကြောင်းသဘောတူ။ porn အကဲခတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အဖြစ်တစ်ခုပျော်စရာအတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်။
"ကျနော့်အမှတ် se နှုန်းမညစ်ညမ်းကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်; ဆွေးနွေးရပျက်ကွက်ကြောင်းဘာမှကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်လာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဲဒီအကြောင်းများစွာကိုအငြင်းပွားမှုများအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများအနေဖြင့်, နိုင်ငံရေးအရရှိပါတယ်; ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ပေါ်ပြူလာယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုစလုံးမှနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကဆက်ဆံရေးအတွက်ချို့တဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ရှိပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု [၏ဆှေးနှေးခ] ဖြစ်၏။ "
ရာခေလသည် - သူတို့တစ်တွေလျှို့ဝှက်လိင်စှဲလမျးသူနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၏သူမ၏အခြေအနေမှာခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်အဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုနားလညျနိုငျခံစားရသူကို - သူမအိမ်ကသူမ၏မိတ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကို extricate မှဥပဒေရေးရာကုန်ကျစရိတ်အတွက်သောင်းချီယူရိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ဖြုန်းပြီးနောက်လူငယ်တစ်ဦးကလေးနဲ့အတူစညျးစိမျဥစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် သူမ၏မိတ်ဖက်နေဆဲငြင်းဆိုကြောင်းလိင်စွဲလမ်း၏အကျိုးဆက်များကနေ။ သူမသည်သူမအစဉ်အဆက်ကိုထပ်မေတ္တာ၌ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့မည်သူမဆိုခိုလှုံပါမညျသံသယ။
"သူတို့ကညာဘက်ကိုသူတို့ laptop များနှင့်ဖုန်းများပေါ်တွင်သင်၏နှာခေါင်းအောက်မှာလုပ်ပါ။ ဒါဟာလိမ်မယ့် - ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင်ပင်မရှိ, နောင်တရှိတယ်, သူတို့ကအချက်မှာစာနာမှုမှုပါပဲ။
"သူတို့လိင်များအတွက်အမျိုးသမီးများ၏ဝယ်ယူမှလှည့်ပြီးတော့, ပို. ပို. လွန်ကဲပစ္စည်းသို့သွားအဖြစ်ထိုအခါကိုအရှိန်။ "
သူကသူမ၏တစ်ဦးလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါပေး၏ပြီးနောက်ရာခေလသည်ပြည့်တန်ဆာများသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြှနျမတစျဦးပုံပြင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလားတူသူတွေကိုဤဆောင်းပါးကိုများအတွက်လိင်ကုသတွေ့ဆုံမေးမြန်း၌ငါ့ကိုမှအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပါပြီ။ သူတို့ဟာညစ်ညမ်းပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးတံခါးပေါက်ဖြစ်လာသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ဟုဆိုသည်။
"ဟုအဆိုပါဖုန်းပေါ်မှာညစ်ညမ်းနှင့်အတူစတင်ပြီးနောက်သူ '' ကိုအဆုံးသတ်မယ့်ပျော်ရွှင်နှင့်အတူအနှိပ်ခံ '' များအတွက်ဆက်စပ်ကြော်ငြာတွေဖြေဆိုခြင်းတက်အဆုံးသတ်," Dunn ကပြောပါတယ်။
"ကုထုံးများတွင်ယောက်ျားသူတို့ကလမ်းကြောင်းဆင်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြဘယ်တော့မှမယ်လို့သင်ပြောပြလိမ့်မယ်" ဟု Dunn ကပြောပါတယ်။ "သင်ကသူတို့ကိုသူတို့ပထမဦးဆုံးဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်အထဲက start နေ့၌ပုံကိုပြသနိုင်လျှင်, သူတို့သည်သူတို့ကုသမှုဖြစ်ကြ၏နေ့များတွင်တက်အဆုံးသတ်မည်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာများ, သူတို့ကအံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ "
ပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုနေ့စဉ် porn ကို အသုံးပြု. ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်းအဆိုပါ 11 သူတို့ကိုယ်သူတို့မေးခွန်းထုတ်သင့်တယ်။ "နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းသင်တစ်ဦးလိင်စှဲလမျးသူသို့မဟုတ်တစ်လိင်စှဲလမျးသူဖြစ်လာဖို့လမ်းပေါ်ဖြစ်စေများမှာဆိုလိုတယ်," အဓိကဆေးရုံများတွင်အလုပ်လုပ်သောသူသည်အခြားကုထုံးကပြောပါတယ်။
ပြဿနာတွေထဲမှာသူကရယူထားသော erectile porn ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအွန်လိုင်း porn ၏မျက်နှာသာအတွက်သူတို့ကိုပယ်ကြပြီအမျိုးသမီးတွေအတွက်စိတ်ကျရောဂါ၏ရလဒ်အဖြစ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူကသူတို့နိုင်အောင် porn-စွဲလမ်းကိုသူတို့ "ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတရားသဖြင့်စီရင်" ၏နိုငျဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်အလုပ်အကိုင်များဆုံးရှုံးသောသူသည် client များရှိခဲ့ပါတယ်။
"သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ဒုတိယကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျသူတို့အိမ်များ, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့်နေအိမ်များဆုံးရှုံးကြောင်းအစစ်အမှန်ဘဝကနေဒါပြတ်တောက်ဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာကလပ်အသင်းများနှင့်စျေးကြီး chatlines swinging, ပြည့်တန်ဆာကိုစတင်သုံးစွဲဖို့ကြီးမားတဲ့ခုန်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကဒီထက်ပြင်းထန်သောအဆိုပါစိတ်လှုပ်ရှားသွားပါနှင့်အချို့သောကုမ္ပဏီခရက်ဒစ်ကဒ်အပေါ်တစ်ချိန်တည်းမှာသွားလေးငါး '' ရေးရာ '' ရှိသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်း "ဟုသူကပြောပါတယ်။
"သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်လုံးဝရှင်းရှင်းချိုးဖဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးအရက်သို့မဟုတ်တစ်လောင်းကစားသမားဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ထိုတစ်အချို့လက်ခံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်သော်လည်းအဘယ်သူမျှထိုလူနှင့်မိန်းမသည်အထီးကျန်ဖြစ်စေတဲ့, ကအကြောင်းပြောသွားဒါကြောင့်ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲပါဝင်ပတ်သက်အရှက်ကွဲခြင်း၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ "
အမြိုးသမီးမြား၏ "သိက္ခာနှင့် misogynistic" ပုံဖော်ခြင်း, "အဘယျသို့လိင်နှင့်ရငျးနှီးတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်အမြင်ဖြစ်သင့်" ယောက်ျားလေးများနှင့်အမျိုးသားများပေးသည်, Dunn ကပြောပါတယ်။
"ငါသည်သူတို့၏ရည်းစားအတော်လေးကြမ်းတမ်းနေကြသည်ဟုအလယ်တန်းကျောင်းမိန်းကလေးတွေကြားရပြီ။ သူတို့ဟာစိတ်ခံစားမှုကွန်နက်ရှင်နဲ့ရငျးနှီးချင်နေစဉ်, ညစ်ညမ်းလိင်သူတို့ရဲ့ရည်းစား '' မျှော်မှန်းချက်ထိခိုက်ကြောင်းရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ အိုင်းရစ် Times သတင်းစာ လိင်စစ်တမ်းအများအပြားလုလင်တို့သည်ယခုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ technique ကိုအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ porn ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုထားသည်။ ငါးဆယ်လေးယောက် 17-24 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ "သင်ကြားပို့ချ" မာဂရက် Dunn မှအထူးစိုးရိမ်သောတွေ့ရှိချက် porn တွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ဤသည်, သူမကပြောပါတယ်, "ရငျးနှီးမှုနှငျ့လိင်အကြောင်းအရာကိုအလွန်မျှော်လင့် messed စိတ်ကူးအကြံပြုထားသည်။ အဲဒီမှာယခုအသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုအမှန်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်,, အလွန်အကျွံ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ပုံပျက်။ "
porn ကောင်းတစ်လမ်းအတွက်အမြဲလိင်အကြောင်းလူတွေကိုသွန်သင်ပေမယ့်, မက Madden ကပြောပါတယ်။ "လူတွေကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေအများကြီးသင်ယူကြောင့်ပျမ်းမျှလိင်ပညာရေးသင်ခန်းစာထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပါပဲ။ ညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ကြပြီးမှာအဆိုးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်အပြုအမူတွေကိုအားပေးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဖို့အတော်လေးလက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အထိချဲ့ကာ။ လူငယ်များအဘို့, အထူးသဖြင့်, ထိုသူတို့အားအကြားခွဲခြားရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ "
Moore ကမှတ်ချက်ပေး: "အင်တာနက်ကိုဆယ်စုနှစ်၏အတိတ်စုံတွဲကျော်ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီသမျှသောလွတ်လပ်ခွင့်သည်ငါအိုင်ယာလန်အတွက်ကျနော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တစ်ဦးကျန်းမာလမ်းအတွက်လိင်နှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဆှေးနှေးနိုငျရှိရာစင်မြင့်အနီးတွင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာမဖွစျ၏။
"ကျနော်တို့ကလိင်-အပြုသဘောဆောင်ကြောင်းအိုင်းရစ်ယဉ်ကျေးမှု၌ဆွေးနွေးချက်ကိုရှောင်ကြဉ်; ငါရိုးရိုးသားသားနှင့်တိုက်ရိုက်ဆိုလိုသော။ ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းကိုကြောင့်များများရှိ၏ ဒါဟာမီဒီယာရဲ့, ဒါပေမယ့်အပေါင်းတို့၏အခက်ခဲဆုံးအရာ, ကပုံရသည်, ရုပ်ပြမဟုတ်သောလမ်းအတွက်လိင်၏ခေါင်းစဉ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်း-ဖြည့်, သို့မဟုတ်ပါကဖြေရှင်းရန်ဒတျချြရဲစွမ်းသတ္တိလိုအပ်နေ။ လက်တွေ့ကျကျလူအပေါင်းတို့ porn ကိုအသုံးပြုပြီ မည်မျှပြောင်ပြောင်တင်းတင်း, ကဆွေးနွေးတင်ပြကြသနည်း "
ကိတ် Holmquist အိုင်းရစ်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကောင့်ရှာကြံနေပါတယ်။ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်လျှို့ဝှက်စွာသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] times.com